Taariikhda madaxweynaha cusub ee maamulka Galmudug Axmed Xaaf (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Taariikhda madaxweynaha cusub ee maamulka Galmudug Axmed Xaaf (AKHRISO)
Madaxweynaha cusub ee maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xuseen (Xaaf) ayaa ku dhashay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, 8-dii bisha July ee sanadkii 1949-ka, isagoona kadib dugsiga Hoose/Dhexe kusoo qaatay isla magaaladaasi, intii u dhaxeeysay 1958-1965-kii.
Madaxweyne Xaaf ayaa intii u dhaxeeysay 1966-1970-kii dugsiga sare kaga baxay Iskuulka Jamaal C/naasir ee ku yaalla magaalada Muqdisho, wuxuuna kadib Jaamacadda Umadda kaga baxay kulliyada dhaqaalaha intii u dhaxeeysay 1972-1976-ka.
Intii uu dhiganaayay Jaamacadda Umadda, ayuu ka shaqo billaabay bankiga dhexe ee Soomaaliya, isagoona kasoo shaqeeyay intii u dhaxeeysay 1975-1979-ka.
Dhanka ganacsiga, ayuu markaasi kadib u wareegay 1979-ka-illaa 1999-ka, wuxuuna intii u dhaxeeysay 1992-2011-ka noqday aas-aasihii iyo howl-geliyihii garoonka NO. 50 ee ku yaalla gobolka Sh/hoose.
Sidoo kale, wuxuu soo noqday aas-aasihii iyo howl-geliyihii diyaaraddii ugu horeeysay ee ka howlgasha Soomaaliya (Daallo Airlines), wixii ka dambeeyay burburka dowladdii dhexe militeriga ee dalka ka tallinaysay.
Madaxweyne Xaaf ayaa sanadkii 2000-ka ku biiray saaxadda siyaasadda dalka, isagoo xilligaasi ka mid noqday xildhibaanada baarlamaankii lagu soo dhisay magaalada Carta ee dalka Jabuuti, waxaana uu xildhibaan soo ahaa illaa 2016-ka.
Dhinaca kale, madaxweyne Xaaf ayaa la xusuustaa gacantii uu ku lahaa fududeynta ergooyinkii Soomaaliyeed ee ka qeyb-gashay shirkii magaalada Carta ee dalka Jabuuti, laguna soo doortay madaxweyne C/qaasim Salaad Xasan.
Ugu dambeyn, madaxweynaha cusub ee maamulka Galmudug Axmed Xaaf ayaa sidoo kale lasoo shaqeeyay qaar ka mid ah hay’adaha Qaramada Midoobey mudadii uu dalka ka jiray burburka.